MB 2017 Oktoobar, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
20-kii Sebtember, Yuhuuddu waxay u dabaaldegeen Sannadka Cusub, oo ah dabbaal aad u muhiim ah. Markaa qofku wuxuu u dabaaldegaa bilowga wareegga sanadlaha, wuxuu xusayaa abuuritaanka Aadan iyo Xaawo wuxuu kaloo xusaa abuuritaanka caalamka, oo ay ka mid tahay bilowga waqtiga. Intii aan akhrinayay waqtiga, waxaan xasuustay in wakhtigaasi sidoo kale leeyahay dhowr macno. Mid ka mid ahi waa wakhtigaas inuu yahay hanti ay bilyaneer iyo tuugleyaal leeyihiin isku waqti. Kulligeen waxaan haysannaa 86.400 ilbidhiqsi maalintii. Si kastaba ha noqotee, maadaama aynaan badbaadin karin (waqtiga aan la buuxin karin ama laga laaban karin), su'aashu waxay soo baxday: "Sidee ayaan u istcimaalnaa waqtiga inoo yaal?"
Bawlos wuxuu ka warqabay qiimaha waqtiga wuxuuna ku boorriyay Masiixiyiinta inay “waqtiga iibsadaan” (Efesos 5,16:XNUMX). Kahor intaanan u fiirsan macnaha aayaddan, waxaan jecelahay inaan idin la wadaago gabay muujinaya qiimaha weyn ee waqtiga:
Khibrad u yeelo qiimaha waqtiga
Si aad u ogaato qiimaha sanadka, weydii ardayga ku dhacay imtixaanka ugu dambeeya.
Si aad u ogaato qiimaha bil, weydii hooyo dhashay ilmo goor hore.
Si aad u ogaato qiimaha toddobaad, weydii tifaftiraha wargeys toddobaadle ah.
Si aad u ogaato qiimaha saacad, waydii kuwa jecel ee sugaya inay midba midka kale arko.
Si aad u ogaato qiimaha daqiiqad, weydii qof seegay tareenkooda, baskooda, ama duulaankooda.
Si aad u ogaato qiimaha labaad, weydii qof ka badbaaday shil.
Si aad u ogaato qiimaha milisecond, weydii qof ku guuleystey billadaha billadaha ah ciyaaraha Olombikada. Waqtiga qofna sugi maayo.
Ururi daqiiqad kasta oo aad haysatid, maxaa yeelay waa qiimo.
La wadaag qof khaas ah waxayna noqon doontaa xitaa mid sii qiimo badan.
(Qoraaga lama yaqaan)
Sidee waqtiga loo iibsadaa?
Marka la eego waqtiga, gabaygan wuxuu keenayaa heer uu Bawlos tusay si la mid ah Efesos 5. Axdiga Cusub dhexdiisa waxaa ku yaal laba erey oo loo tarjumay Griigga si loo iibsado. Mid waa agorazo, oo loola jeedo inaad wax ku iibsato meel suuq caadi ah (agora). Midda kale waa exagorazo, oo loola jeedo iibsashada waxyaabo ka baxsan. Bawlos ereyga exagorazo wuxuu adeegsaday Efesos. 5,15-16 wuxuuna na waaniyey: Aad uga taxadar sida aad u nooshahay; Xigmad ha u dulmin, laakiin isku day inaad caqli leedahay. Ka faa'iidayso fursad kasta oo aad wanaag ku sameyso waqtigan xun ”[New Life, SMC, 2011]. Tarjumaadda Luther ee 1912 waxay leedahay "waqtiga soo iibso." Waxay u muuqataa in Bawlos uu doonayo inuu nagu dhiirrigeliyo inaan iibsano wakhtiga ka baxsan suuqa caadiga ah.
Annagu si fiican ugama naqaan ereyga 'soo iibso'. Nolosha ganacsiga waxaa loo fahmay inay tahay "madhan iibsashada" ama macnaha "aqbalitaanka". Haddii qofku bixin kari waayo deymaha, waxay sameyn karaan heshiis ay iyagu naftooda ugu kireystaan ​​iyagoo midiidin u ah qofkaas deynta lagu leeyahay ilaa deynta laga bixinayo. Adeeggooda sidoo kale waa la joojin karaa si hordhac ah haddii qof bixiyo deynta booskiisa. Markii deyn laga soo iibsaday adeegga sidan, waxaa lagu tilmaamaa "kicin ama soo furan".
Qiimaha qiimaha ayaa sidoo kale lagu kicin karaa - sida aan ognahay tan maanta dukaamada waawayn. Dhanka kale, Bawlos wuxuu noo sheegayaa inaan waqtiga isticmaalno ama iibsano. Dhanka kale, annagoo ku saleyneyna macnaha guud ee tilmaamaha Bawlos, waxaan aragnaa inaan noqono kuwa raacsan Ciise. Bawlos wuxuu noo sheegayaa inaan fahamno inay tahay inaan diirada saarno kii waqtiga noo iibsaday. Dooddiisu ma aha inaan waqti u lumiyo waxyaabaha kale ee inaga horjoogsanaya in aan diiradda saarno Ciise iyo shaqada uu na casuumay.
Hoos waxaa ku yaal faallada Efes 5,16: 1 ee mugga XNUMX ee “Daraasadda Erayga Wuest ee Griiga Cusub:
"Iibsada" waxay ka timid ereyga Giriigga ee exagorazo (ἐξαγοραζω), oo macnaheedu yahay "soo gado". Qaybta dhexe, oo halkan looga isticmaalo, macnaheedu waa "inaad wax u iibsato naftaada ama faa'iidadaada." Tusaale ahaan marka loo eego, waxay ka dhigan tahay "ka faa iidayso fursad kasta oo caqli iyo xurmad leh si aad wax wanaagsan u qabatid", sidaa darteed himilada iyo wanaagga Macnaheedu waa lacag bixinta markaan adeegsanayno waqtiga ”(Thayer). “Waqtiga” maahan taariikh (χρονος), micnaheedu waa “waqtiga sida oo kale”, laakiin kairos (καιρος), “waqtiga loo arki doono istiraatiijiyad ahaan, waqti go'an, iyo waqti ku habboon. Mid ka mid ahi waa inuusan ku dadaaleynin inuu waqtiga u adeegsado sida ugu macquulsan, laakiin uu uga faa'iideysto fursadaha aan heysano.
Maaddaama waqtigu caadi ahaan aan loo arki karin wax badeecad ahaan macno ahaan loo iibsan karo, waxaan fahamsanahay hadal Bawlos muuqaal ahaan, taas oo runtii macnaheedu tahay inaan si wanaagsan u isticmaalno xaaladda aan ku jirno. Haddii aan sidaa yeelno, waqtigeenna wuxuu yeelan doonaa macno badan iyo macno sidoo kale wuxuu "bixin doonaa".
Waqtigu waa hadiyad ka timid xagga Eebbe
Iyada oo qayb ka ah abuuritaanka Eebbe, waqtiga ayaa hadiyad noo ah. Qaarkood waxay leeyihiin badan iyo qaar ka yar. Sababo la xiriira horumarka caafimaad, jiritaanka hidda-wadaha wanaagsan, iyo nimcooyinka Eebbe, kuwa badan oo naga mid ah ayaa ku noolaan doona inay ka weynaadaan 90 jir qaarkoodna laga yaabo inay xitaa ka weynaadaan 100 sano jir. Macno malahan inta waqti ee Eebbe ina siinayo, maxaa yeelay Ciise waa Rabbi waqtiga. Isagoo ku dhex jira jidhka, wiilka weligiis ah ee Eebbe wuxuu ka yimid weligiis ilaa waqtiga. Sidaa darteed, waaya-aragnimada Ciise waxay abuurtay waqti ka duwan kan ay innaga la tahay. Waqtigeenna la abuuray waa ku xadidan yahay muddada, halka waqtiguna Eebbe yahay mid aan xadidneyn oo ka baxsan abuurista. Waqtiga Eebbe loo qaybin maayo qaybo, sida ay innaga tahay, waagii hore, hadda iyo mustaqbalkaba. Waqtiga Eebbe sidoo kale wuxuu leeyahay tayo gabi ahaanba ka duwan - nooc waqti ah oo aanan si buuxda u fahmi karin. Waxa aan sameyn karno (iyo waa inaan sameysanno) waa inaan ku noolaano waqtigeenna, anagoo kalsooni ku qabna inaan la kulmi doonno Abuuraheena iyo Bixiyahayaga waqtigiisa, weligiis.
Ha u isticmaalin ama ha ku khasaarin wakhtiga si qalad ah
Markaan si qayaxan uga hadalno waqtiga oo aan nidhaahno waxyaabo sida “waqti ha luminin”, waxaan ula jeednaa qaab aan u lumi karno adeegsiga saxda ah ee waqtigeenna qaaliga ah. Waxay dhacdaa markaan u oggolaano qof ama wax inay ku qaataan waqtigeenna waxyaabaha aan annaga qiimo lahayn. Tan waxaa si ahaan loo muujiyey, macnaha waxa Bawlos doonayo inuu noo sheego: "Soo iibso waqtiga". Wuxuu hadda na waaniyey inaanan si khaldan u isticmaalin ama aan u lumino waqtigeenna taasi oo nagu kallifaysa inaanu ku biirinno wixii Ilaahay qiimo u leh iyo innaga oo ah Masiixiyiin.
Macnaha guud, maadaama ay ku saabsan tahay "waqtiga iibsashada", waa inaan xasuusano in waqtigeenna markii ugu horreysay la iibsaday oo dib loo soo celiyay dembidhaafkii Ilaah ee loo soo mariyey wiilkiisa. Markaa waxaan sii wadaynaa inaan iibsano waqtiga annaga oo adeegsanayna waqtigeenna si habboon oo aan ugu biirineyno xiriir sii kordhaya oo lala yeesho Ilaah iyo midba midka kale. Iibsashada waqtigan waa hadiyadda Eebbe inagu siiyay. Markuu Bawlos ku waaniyay Efesos 5,15:XNUMX inaan “si taxaddar leh u eegno sida aan nolosheenna ugu nool nahay, maahan sidii kuwa caqliga leh laakiin ee waxaan nahay niman caqli leh,” wuxuu ina baray inaan qaadanno fursadaha waqtigaas na siinayo Eebbe. sharaf.
Himiladeenna "inta u dhaxaysa waqtiyada"
Ilaah wuxuu ina siiyay wakhti aan ku soconno iftiinkiisa, oo aan la wadaagno adeegga Ruuxa Quduuska ah ciise si aan u sii gaarno howsha. Si tan loo yeelo, waxaa naloo siiyay "waqtiga u dhexeeya waqtiyada" Masiixa koowaad iyo kan labaad. Hadafkayagu waqtigan waa inaan ka caawino dadka kale sidii ay u heli lahaayeen oo ay u ogaan lahaayeen Eebbe, uga caawin lahaayeen inay ku noolaadaan nolol iimaan iyo jacayl leh, oo aan ku kalsoonaano in Ilaahay uu dhammaan doono ilaahay abuuray wuu iibsaday si buuxda, oo waliba waqtigu ku jiro. Waxaan ka baryayaa in GCI-ga aan ku iibsan doonno waqtigii Eebbe ina siiyay anagoo si aamin ah ugu noolaanaya oo ku wacdinnaya injiilka dib-u-heshiisiinta ee Masiix dhexdeeda.
Mahadnaqyada hadiyadaha Eebbe ee waqti iyo weligiis,
Adeegso hadiyadda waqtigeenna